သင်းကွဲ တေးမြုံငှက် တစ်ကောင်၏ နောက်ဆုံးဖြောင့်ချက်များ – နိုးဆက် နေ့ | PoemsCorner
သင်းကွဲ တေးမြုံငှက် တစ်ကောင်၏ နောက်ဆုံးဖြောင့်ချက်များ – နိုးဆက် နေ့
(ကျွန်တော် ကြားခဲ့ရသော သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ပြောနေကြသည့် “ကဗျာဆိုတာ ကာရန်နဲ့ဘဲဖြစ်သင့်တယ်…မော်ဒန်ကဗျာတွေကို ကဗျာလို့ကို ခံစားလို့မရဘူး” ဆိုသောစကား “စိတ်ထဲရှိတိုင်းရေးတိုင်း ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး” ဆိုတဲ့စကား… တစ်စုံတစ်ယောက်၏ “မင်းပုံစံနဲ့ ကဗျာရေးတယ်” ဟူသော မဆီမဆိုင် တိုက်ခိုက်ခံရသည့် စကား သင်္ချာဆရာမနှင့် ပြဿနာတက်ပြီး “သချာင်္မတွက်ဘဲ ကဗျာစပ်နေလို့ကတော့ ခွေးဖြစ်မှာဘဲ” ဟူသည့်စကားများကို စိတ်ထိခိုက်စွာ ကြားနာခဲ့ရသောကြောင့် ကျွန်တော် နာကျင်စွာရေးဖွဲ့ခဲ့သော …. တစ်ခုဖြစ်ပါသည်..။) (အားလုံးလိုလိုက လက်မခံကြသည့်အတွက် ကျွန်တော် ရှက်ရွံ့စွာ ကဗျာဟုတပ်ရမည့်နေရာတွင် ကွက်လပ်ကလေးထားခဲ့ပါသည်..)
ကျွန်တော်ဟာ ခေတ်ရဲ့ မျက်လုံးတွေကို ရှောင်ပုန်းရင်း
စကားလုံးတွေ ကိုရွံ့ကြောက် နာကျင်ရင်း
ကျွန်တော့နာမည် Phoenix ပေါ့
ပြာက ဖြစ်လာတဲ့ ငှက်မို့ ပြာပြန်ဖြစ်ဖို့သာ တောင့်တ
ဒီည ကျွန်တော် သေဆုံးမယ်..။
ဒီတစ်ည ရင်ကွဲနာ ကျခံဖို့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ကျွန်တော်ယူလာတယ်..။
နိုးထလာတော့မဲ့ ကောင်းချီးတရားတွေရဲ့ သြဘာသံအောက်မှာ..
ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားနဲ့ ပွင့်ပစ်လိုက်ဖို့ဘဲ လိုအပ်ခဲ့တယ်
စုတ်ချက်လွန်တဲ့ ကံကြမ္မာ ကိုယ်တိုင်ပိတ်မျဉ်းဟာ
ကဗျာငတ် စာငတ် လူတစ်ယောက်အတွက်
ပြေးလမ်းက မဖြောင့်သလို တာထွက်လည်းမကောင်း
ဒီလမ်းကြောင်းမှာဘဲ ကျွန်တော်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာ အခါခါ..။
ပင်လယ်ရေတွေထဲ နစ်မြုပ်သွားတဲ့ လူတွေရဲ့ ဆဌမအာရုံမှာ….
ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ နာကျင်ခြင်းတွေ စိမ့်ထွက်ကျရာ..
ရင်ခွင်ဆိုတဲ့ နယ်ပယ် အခန်းကျဉ်းတစ်ခုထဲမှာ……..
လောကလို့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ နာမည်တပ်ခံထားရတဲ့
ကျွန်တော့ အနုပညာဟာ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီ..။
ကျွန်တော် အက်ကွဲစွာ ငိုကြွေးပစ်သင့်တယ်မဟုတ်လား။
နွေသက်ပြီး ကန္တာထွန်းတဲ့ အထိ..
ပိုးမွေးသလိုမွေးခဲ့တဲ့ လက်ဖ၀ါးတွေကတော့ မျက်ရည်သုတ်တဲ့ကိရိယာ..ဖြစ်လာတယ်..။
ကဗျာရေးဖို့ ဘ၀ကို လစ်လျူရှုခဲ့တဲ့သူကို
ဘ၀က.. ကဗျာပေးဖို့ လစ်လျူ ရှုလိုက်တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေအတွက်..
ဒုတိယဘုရားသခင်လို့ထင်တဲ့ အနုပညာကို လူ့ပါးစပ် တွေနဲ့ တန်ခိုးပြိုင်ရင်း..
ကိုယ်ဘဲ ပိုင်ခဲ့တဲ့ နာကျင်ခြင်း များအတွက်..
ကိုယ့်ကို ရည်ရွယ်တိုက်ခတ်လာတဲ့ စကားလုံးမုန်တိုင်းများ…အတွက်
အဖေ အမေရဲ့ ငြိုငြင်မှုအတွက်…
ချစ်သူရဲ့ ဥပေက္ခာ အတွက်….
အောက်ဆုံးက မတက်တဲ့ ကျောင်းစာမေးပွဲရမှတ်တွေအတွက်…
တစ်ဖက်သက် ၀ါဒများထံ လည်စင်းခံခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့ကဗျာတွေအတွက်
အခုဘ၀ကို သီချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ ကျေနပ်ပစ်မယ်..
ရင်ခွင်ပျောက် ၁၈ နှစ်သားကို
ခင်ဗျား ကြင်နာစွာထွေးပွေ့ပါလို့ လှိုက်လှဲစွာတောင်းဆိုပါရဲ့..။
ကျကွဲသံတွေသာ ကျွန်တော့ရဲ့ ဂီတ
အိမ်ထဲက ဆွဲထုတ်မခံရဘူးတဲ့ ဓါးလို
ပီကေ စားကြတဲ့ ခေတ်မှာ ၀ါးပြီးရင်ထွေးထုတ်ကြ..
ခဏတာ အရသာ ခံရသူနဲ့ တစ်ဘ၀စာ ရှုံးခန်းတိုင်ရသူ
နှလုံးသားချင်းတော့ ဘယ်လိုမှ့ မတူနိုင်ဘူး..။
ခင်ဗျား ကျွန်တော့ကို မြင်ဘူးတယ်မဟုတ်လား…
စိတ်ထဲမှာ နီရဲနေအောင် တစ်ပင်လုံးပွင့်တယ်
ကျွန်တော့ကို ခိုးယူသွားတဲ့ အနုပညာတစ်ခုကိုရော..
ကျွန်တော့ကို ပြန်တွေ့ခဲ့တဲ့ ခေါင်ရမ်းပန်း နီရဲရဲတွေကိုရော..
ကျွန်တော့ချစ်သူနဲ့ သူ့ချစ်သူတို့ရဲ့ အတူတူလင်းမဲ့မနက်ခင်းကိုရော
သိမ်းထားဘူးတဲ့ ကဗျာဆရာများစွာရဲ့ ကဗျာတွေကိုရော
လေ့ကျင့်ထားတဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေအောက်က အပြုံးမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်
မျက်ရည်တွေကို လက်နက်ချစေလောက်တဲ့ ရယ်မောခြင်းတစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်
ဟောဟိုက နိုင်ငံအို..ကျွန်တော့ကို ကြိုနေပြီ။။
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ မြို့ကို ကျွန်တော် ၀င်တော့မယ်..။
ဒဏ်ရာနဲ့ ရင်းခဲ့တဲ့ ဂီတကို
အဲဒီ သွေးညှီရောင်လင်းတဲ့ ရင်ခွင်မှာ..
ကျွန်တော့မှာ တစ်ဘ၀လုံးနဲ့ရင်းတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိဖူးတယ်..
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို တစ်ခါဘဲဆိုပြနိုင်လိမ့်မယ်..။
ပန်းတွေကို သာယာတဲ့ ကျွန်တော့ကိုယ်ပေါ်
ဖြူဝင်း နူးညံ့တဲ့ ဆောင်းရနံ့တို့နဲ့
ကျွန်တော်နစ်ရမဲ့ မြစ်ကောကြီးရဲ့ ကမ်းနှဖူးမှာ
သင်းကွဲလာတဲ့ ငှက်ရဲ့ နောက်ဆုံး ဖြောင့်ချက်အတွက်
ကျွန်တော့ကို နွေးထွေးစွာ ပွေ့ဖက်ပေးပါ..
ကျွန်တော်ဟာ Phoenix တစ်ကောင်ပေါ့။
သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင်ဂီတ ရှိခဲ့ပါလားလို့
ခင်ဗျား ကျွန်တော့အတွက် တစ်ချက်ကလေး ၀မ်းသာပေးရင်ဖြစ်စေ
ကျွန်တော် ရင်ကွဲခံ သီဆို ရကျိုးနပ်ပြီလေ…။
လွတ်လပ်ရေးနေ့ (စိတ်တွေ လွတ်လပ်ရေးမရခဲ့သော နေ့)
In: ကဗျာ Posted By: 13th Date: Jan 5, 2013
– နောက်ဆုံးပြောခွင့် –
Leave comment 17 Comments & 660 views
comment မှာဘာရေးလို့ ရေးခဲ့ရမှန်းမသိအောင်ကို ကဗျာကဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျ မြှောက်ပင့်ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ ဒီကဗျာလေး တကယ်ကိုဖတ်လို့ကောင်းပါကြောင်း ~~
By: X - ray at Jan 5, 2013
ဒီကဗျာလေးဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ အမ တော်တော်လေး မောသွားတယ်ကွာ.. ပြောစရာတွေလည်းရှိလာတယ်။ မင်းစိတ်ထိခိုက်စွာ ကြားခဲ့ရတယ်ဆိုတာဟုတ်မှာပါ…ဒါပေမဲ့ ဒီကဗျာလေးကို ရလိုက်တဲ့အတွက်တော့ မင်းကျေနပ်လိုက်ပါ
ကဗျာလေးတော်တော်ကောင်းတယ်.. ခံစားချက်တွေနဲ့ မင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုပါ သိလာရတယ်။ အဲဒါကြောင့် ၀မ်းနည်းသွားမိတယ်..။
အမအပါအ၀င် PoemsCorner ဆိုတဲ့ နယ်မြေလေးတစ်ခုမှာ မင်းကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လက်ခံမဲ့သူတွေ ရှိသားဘဲ ။ မင်းပြောခဲ့သလိုဘဲ အိမ်နီးချင်းတွေသိစရာမလိုဘူး..ရင်နီးချင်းတွေဘဲ သိဖို့လိုတယ်လေ။ အနုပညာနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျပြီးတော့ မင်းမကြောက်စမ်းပါနဲ့လို့ အမ တစ်ယာက်အနေနဲ့ ပြောချင်တယ် (ဖြစ်နိုင်ရင် အမိန့်ပေးချင်တယ်) ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို ခံစားချက်နဲ့ မာနကို ကဗျာထဲမှာ ပေါက်ကွဲထွက်နိုင်ခဲ့လို့ လေးစားတယ် မောင်လေး…။ ဆက်လျောက်ပါ.. ကဗျာရေးတဲ့အတွက် မင်းလှောင်သံတွေကြားရရင် ကိုယ့်ကို စိတ်လိုလက်ရ အားပေးထားတဲ့သူတွေကို ပြေးမြင်ပါ..။
By: sawkaythwe at Jan 5, 2013
ကျွန်တော်တို့ တွေအတွက်ကတော့ ကဗျာ ဆိုတာဘ၀ပါပဲ
By: loafer at Jan 5, 2013
သူငယ်ချင်း… ငါ poemscorner ကိုစရောက်ရောက်ချင်း နင့်ကဗျာကို အားလျော်စွာတွေ့လိုက်ရတယ်။။
စိတ်မကောင်းတောင် ဖြစ်သွားတယ်ဟာ တကယ်.. ဒါပေမဲ့
နင့်ကဗျာလေးကို စိတ်မကောင်းစွာတွေများစွာနဲ့ဘဲ ငါကြိုက်သွားပါတယ်.။
အပေါ်က ကွန်မန့်တွေအားလုံးကိုဖတ်ပြီး နင့်အစားကြည်နူးသွားတယ် တက်ခေတ် ….
By: သွဲ့သွဲ့ at Jan 5, 2013
ကို X-ray , မကေသွယ်, ကို loafer , သွဲ့လေး….အားလုံးကို လှိုက်လှဲစွာကျေးဇူးပါ.ဗျ..။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ဒီကဗျာမှာ ကွန်မန့်တွေကို ကျွန်တော်ငတ်ခဲ့တယ်..။ တကယ့်ကို ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ကွန်မန့်တွေဘဲ ဖတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်လဲ..အားလုံးကို မြတ်နိုးစွာ လေးစားသွားပါတယ်..။ ညစ်နေတဲ့ စိတ်လဲတော်တော်လေးကို ကြည်လင်သွားပါပြီ ကျေးဇူးရှင်များရေ…..
မကေသွယ်ကိုတော့ တကူးတကကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့လိုမယ်ထင်တယ်ဗျ.. ကျေးဇူးတရားတွေများသွားပြီမို့..
အမအကောင့်ရှိရင် ပေးပါလို့ တောင်းပါရစေ…
ကျွန်တော့ အကောင့်က [email protected] ပါ..။
By: waiyan at Jan 6, 2013
အဲဒီလောက်လေး ပြေားပေးသွားတာကို ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဗျာ..
By: နိူးဆက် နေ့ at Jan 6, 2013
ကဗျာဆိုတာ ကာရံပါမှ ကဗျာလို့ ခေါ်ရမယ်ဆိုတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း လက်မခံတော့ပါဘူး။ ကာရံပါရင် အသံသာတယ် လှတယ် ဆိုတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ကဗျာရေးနည်းတွေ ကဗျာဝါဒတွေ ပေါများလွန်းတဲ့ ဒီခေတ်ထဲမှာ ကာရံပါမှ ကဗျာလို့ ပြောနေရင်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ထားပါတော့လေ .. မင်းပုံစံနဲ့ ကဗျာရေးတယ် ဆိုတဲ့ စကားကလည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်တဲ့ စကားပါ။ ကဗျာရေးတဲ့သူက ဘယ်ပုံစံ ရှိရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာများ ဘယ်မှာ ကြားဖူးလို့လဲ။ သင်္ချာမတွက်ဘဲ ကဗျာစပ်နေလို့ ခွေးမဖြစ်ပါဘူး တခုတော့ ရှိတယ် သင်္ချာချိန်မှာတော့ သင်္ချာကို အာရုံစိုက်ရမယ်။ စာလုပ်တဲ့အချိန် စာပဲလုပ်ပါ ကဗျာအတွက်က သီးသန့်အချိန်ထားပါ ကျွန်တော်လည်း ကျောင်းချိန်တွေမှာ ကဗျာခိုးရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အကန့်နဲ့ ထားစေချင်လို့ ပြောတာပါ။ ကဗျာကို ကဗျာလို့တောင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် မတပ်ရဲဘူးဆိုတာတော့ နည်းနည်း ပြောချင်တယ်။ ကိုယ်ယုံကြည်တယ်မလား ရဲရင့်လိုက်စမ်းပါ။ ဒီထဲမှာ ကဗျာချစ်တဲ့သူတွေချည်းပဲ နေကြတာပါ။ ဒီကဗျာကို ကဗျာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ငြင်းမဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး။ နောက်ဆုံးတခုပြောပါ့မယ် ညီလေး … မင်း ကဗျာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။
By: chiron at Jan 6, 2013
အကို ချီရွန် ခင်ဗျာ… အခုလိုမျိုး ကျွန်တော့ကဗျာလေးမှာ အချိန်အကုန်ခံပြီး ကွန်မန့်လာပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။
အကို ပြောသလိုဘဲ ကျွန်တော့ကိုယ် ကျွန်တော်မယုံကြည်စိတ်ကြောင့် မို့ ကျွန်တော်ပြောမိတာပါ
ကဗျာချစ်တဲ့သူတွေကို ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်.. ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ် .. ကျွန်တော့ကဗျာတွေကို ကဗျာမဟုတ်ဘူးလို့မငြင်းဘဲ လက်ခံပေးကြတဲ့သူဟာ Poemscorner မှာဘဲ ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော် အခုကစပြီး ယုံကြည်လိုက်ပါတယ်..။ မရင့်ကျက်မှုကြောင့် ကျွန်တော်မှားတဲ့ အမှားမျိုးမို့ နားလည်ပေးပါလို့ အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်..
( အကို ချီရွန်က မင်းကဗျာသိပ်ကောင်းပါတယ်လို့ ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဟန်မဆောင်ဘဲ ရဲရင့်လိုက်ပါတယ်ဗျ )
By: 13th at Jan 6, 2013
ကိုယ့်ကဗျာကို ကဗျာလို့မတပ်ရဲဘူးဆိုလို့ကဗျာဆရာလို့ သေချာခေါ်လိုက်တာပါ.။
By: မိုးဝေ at Jan 21, 2013
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ… ကိုမိုးဝေနဲ့အတူတူ ကွန်မန့်ပေးသွားတဲ့လူတွေကို ထပ်ပြောတာပါ
By: 13th at Jan 22, 2013
ကာရံမပါလို့ ပြောကြတာတွေကကျန်ခဲ့ပါပြီဗျာ…..ကျွန်တော်ကိုအရင်တုန်းကကဗျာဆရာတစ်ယောက်ကပြောဖူးတယ်ဗျ(အခုတော့မရေးဖြစ်တော့ပါ သူ့ ကလောင်ကိုလည်းမပြောပြလို့ မဖော်ပြတော့ပါ)ကဗျာဆရာဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ပြီလို့ ထင်လဲတဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ ပြောတော့ အေးတဲ့ မင်းလို သေးတယ်တဲ့ကဗျာဆရာဆိုတာဘယ်သူမှသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ဒီနေ့ ငါကဗျာဆရာဖြစ်ပြီကွာဆိုရင်ဖြစ်သွားရောတဲ့ဗျာ…..အဲ့တော့ဗျာယုံကြည်ချက်သာထားပါ။အားပေးပါတယ်။
By: လပန်းဧည့် at Jan 22, 2013
ကျေးဇူးပါ ကိုလပန်းဧည့်….. ယုံကြည်ချက်ထားရဲစေမဲ့ ကွန်မန့်လေးပါ
By: နိုးဆက်နေ့ at Jan 27, 2013
By: အောင်မော်ဟိန်း at Mar 31, 2013
By: soewaihin at Apr 1, 2013
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကို အောင်မော်ဟိန်းနဲ့ ကို ဝေဟင်.။ လှိုက်လှဲစွာပြောတာပါ.။
By: 13th at Apr 5, 2013